လူမှုဖူလုံရေးအာမခံလုပ်သား ၁၂ သိန်းခွဲအထိရှိလာ၊ ယခုနှစ်ငါးလအတွင်း အကျိုးခံစားခွင့်ငွေ ကျပ? - Yangon Media Group
လူမှုဖူလုံရေးအာမခံလုပ်သား ၁၂ သိန်းခွဲအထိရှိလာ၊ ယခုနှစ်ငါးလအတွင်း အကျိုးခံစားခွင့်ငွေ ကျပ?
ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၁၃-လူ မှုလုံရေးအာမခံထားရှိသည့် လုပ် သားဦးရေ ၁၂ သိန်းခွဲအထိ ရှိ လာသလို ယခုနှစ်ငါးလတာအတွင်း တွင်ပင် လုပ်သားအာမခံအကျိုးခံ စားခွင့် ငွေကျပ်သန်းပေါင်း ၄၂ဝဝ ကျော်အထိ ထုတ်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အာမခံထားရှိသည့်လုပ်သား များအတွက် မသန်စွမ်းမှုအကျိုး ခံစားခွင့်ငွေထုတ်ပေးခြင်း၊ လုပ် ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် သေ ဆုံးမှုအတွက် ကျန်ရစ်သူ အကျိုး ခံစားခွင့်ငွေထုတ်ပေးခြင်း၊ ဆေး ဖိုးစရိတ် ငွေပြန်လည်ထုတ်ပေး ခြင်း စသည့်အကျိုးခံစား ပြန်လည် ထုတ်ပေးသည့်ငွေသည် ၂ဝ၁၈ ခု နှစ် ဧပြီမှ သြဂုတ်လအတွင်းထိ ကျပ်သန်းပေါင်း ၄၂ဝဝ ကျော်လာ ပြီဖြစ်ကြောင်း လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ မှ အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်က သိရသည်။
”ဖူလုံရေးအာမခံလုပ်သား တိုးမြင့်လာပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးက ပိုတိုး မြင့်လာတာပါ။ အာမခံလုပ်သား တိုးမြင့်လာလေ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးရ တဲ့ငွေ အကျိုးခံစားခွင့်ငွေက ပို တိုးလာလေဖြစ်ပါတယ်။ အခု ပြီး ခဲ့တဲ့ဧပြီလကနေ သြဂုတ်လထိကို အာမခံစနစ်လေးမျိုးအောက်မှာရှိ တဲ့ အကျိုးခံစားခွင့်ခေါင်းစဉ် ၁၁ မျိုးလောက်ကနေ ထုတ်ပေးတဲ့ခွင့် ပြုထုတ်ပေးငွေဟာ ကျပ်သန်း ၄၂ဝဝ ကျော်ရှိပါတယ်”ဟု လူမှုဖူ လုံရေးအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး က ပြောသည်။
လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့အနေဖြင့် လည်း လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေပါအာ မခံစနစ် ခြောက်မျိုးအနက် လက် ရှိတွင် အာမခံစနစ်လေးမျိုးအရ အကျိုးခံစားခွင့်ငွေများ ထုတ်ပေး နေခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းအကျိုးခံစား ခွင့်များကို စက်မှုဇုန်နယ်မြေအ လိုက်ရှိ အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထား သည့် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများမှ အာ မခံလုပ်သားများ၏တင်ပြလာသည့် အမှုဖြစ်စဉ်အပေါ်မူတည်၍ သက် ဆိုင်ရာ နယ်မြေရုံးများမှ တစ်ဆင့် တိုင်းရုံး၊ တိုင်း/ပြည်နယ်ရုံးများမှ နေပြည်တော်အဆင့်ထိတင်ပြကာ စိစစ်ထုတ်ပေးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဟုပ်ကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်းသို့ ကန်ဒေါ်လာ ခြောက်သန်းလှူခဲ့တဲ့ ဘီယွန်းစေးနဲ့ ဂျေဇီ
တရုတ်ပြည်နယ် ငါးခု၌ ဝက်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွား၊ ဝက်များသယ်ယူခြင်း ရောင်းချခြင်း ပိတ်ပင်
အမေရိကန်တွင် ခြင်ပေါက်ပွားမှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်မည့်ဆေး ငါးနှစ်အတွင်း ထွက်ပေါ်လာတော့မည်